बाइ बाइ सन् २०२० : "२०२० अरु बर्षभन्दा धेरै फरक र पिडादायी भयाे ! " - Demo Khabar
शनिवार, माघ १० २०७७Jan 23 2021
बाइ बाइ सन् २०२० : "२०२० अरु बर्षभन्दा धेरै फरक र पिडादायी भयाे ! "
शुक्रवार, पौष १७ २०७७
काठमाडौं, पुस । अंग्रेजी नयाँ बर्ष सन् २०२० अरु बर्षहरुभन्दा धेरै फरक र पिडादायी भएर वितेको छ । विश्वलाई नै एकैचोटी ठप्प पारेको र अधिकांशलाई प्रभावित कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण यो बर्ष लामो समयसम्म स्मरणीय बर्ष बन्ने भएको छ ।
सन् २०२० लाग्दा नलाग्दै सुरु भएको कोरोनाको महामारीले सवै क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष मारमा प यो भने वर्षभरी कोरोना नै केन्द्रविन्दुमा रह्यो । कोरोना महामारीबीचमा पनि यस वर्ष धेरै महत्वपूर्ण घटनाहरु भएका छन् ।
यस बर्षका मुख्य घटनाहरु यहाँ छोटकरीमा चर्चा गरिएको छ । कोरोना महामारी यस बर्षको सवैभन्दा ठूलो घटना भनेकै कोरोना महामारी हो । यो यस बर्षको मात्रै नभई यस युगकै ठूलो घटनाको रूपमा रहनेछ ।
कोरोनाको सर्वव्यापी र सर्वपक्षीय क्षतिको कुनै हिसाव किताव गरेर नै सम्भव छैन । तर मानवीय र आर्थिक क्षतिको मात्रै बढी चर्चा भएको छ । कोरोनाका कारण अहिलेसम्म १८ लाख १३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने ८३ करोड १३ लाखभन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भएका छन् ।
आर्थिक क्षतिको पनि भरपर्दो विवरण अझै आएको छैन । महामारी चलिरहेकै बेलामा गत नोभेम्बर ८ तारिखदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप प्रयोगमा आएको छ । फाइजर र बायोएनटेकले विकास गरेको खोप प्रयोग भइसकेको छ भने अन्य खोप पनि प्रयोग गर्न मिल्ने अन्तिम चरणमा रहेकाले महामारी न्युनिकरण हुने अपेक्षा गर्दै सन् २०२० लाई विदाई गरिँदैछ ।
इयूबाट बोलायतको बहिर्गमन लामो विवाद र रस्साकस्सी हँुदै युरोपेली संघबाट बेलायत बाहिरिएको छ । जनवरी ३१ मा बेलायत युरोपेली संघबाट औपचारिक रुपमा बाहिरिएको हो । पछिल्लो तीन वर्षदेखि युरोपेली संघबाट बाहिरिने प्रक्रिया अन्यौलमा परेको थियो ।
यूरोपेली संघबाट बाहिरिएपछि अहिले ब्यापार, सुरक्षा, यातायातलगायतका क्षेत्रमा बेलायतले नयाँ सम्बन्धका लागि सम्झौता गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । ट्रम्पमय राजनीति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै चर्चामा रहेपनि यसबर्ष कार्यकाल नवीकरण गर्ने बर्ष भएकाले पनि बढी चर्चा भयो ।
गत नोभेम्बर ३ मा भएको निर्वाचनबाट कार्यकाल लम्ब्याउन नसके पनि उनले निर्वाचनको बेलाको आरोप प्रत्यारोप, मास्क बहिस्कार, कोरोनाप्रतिको उनको दृष्टिकोणलगायतका कारणले उनी चर्चाको केन्द्रमा नै रहे ।
दोस्रो कार्यकाल गर्न नपाउने दुर्लभ राष्ट्रपतिको रुपमा उहाँलाई यस बर्षले टुंगो लगायो । उनलाई पराजित गर्दै डेमोक्रेटिक उम्मेदवार जो बाइडेन निर्वाचित भए । निर्वाचनपछि पनि उहाँले नतिजा अस्वीकार गरेर थप चर्चा बटुले ।
बर्षको सुरुवातमा फेब्रुअरी ६ तारिखका दिन तल्लो सदनमा पारित ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव माथिल्लो सदन सिनेटले खारेज ग¥यो । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता अमेरिकाले तालिवानसँग सम्झौता गर्दै अफगानिस्तानबाट आफ्नो अमेरिकी सैनिक फिर्ता बोलायो ।
तालिवान विद्रोही र अमेरिकाबीच अफगानिस्तानमा १८ बर्षभन्दा बढी समय युद्ध चलेकोमा अहिले कम भएको ठानिएको छ । तर शान्ति प्रक्रिया भने अझै पनि तार्किक निश्कर्षमा पुगेको छैन ।
सलह आतंक यस बर्षका विश्वव्यापी चर्चित घटना मध्ये सलह आतंक पनि एक हो । विषेशगरेर दक्षिण एसियाली मुलुकमा यसले बढी चर्चा पायो । कोरोनाको महामारी चलिरहेका बेला सलह पनि फैलिएको विषयले भोकमरी हुने र खाद्य सङ्कट आउने सम्मको विश्लेषण गरिएको थियो ।
सन् २०१९ सुरुवाती महिनामा पहिलो पटक यमनमा देखिएको सलह नै एक बर्षपछि साउदी अरब, इरान हुँदै दक्षिण एसियाली राष्ट्र पाकिस्तान भित्रिएको थियो । त्यसपछि पाकिस्तानमा ठूलो क्षति पु¥याउँदै भारत हुँदै नेपाल छिरेको थियो । यसले यी देशको कृषिमा ठूलो क्षति गरेको छ ।
ठूला दुःखद घटना यस बर्षका ठूला घटनामध्ये इराकको राजधानी बग्दादमा अमेरिकी हवाई हमलामा इरानी उच्च सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको हत्याले विश्वभरी नै तरङ्ग फैलायो । जनवरी ३ मा भएको यो घटनाको चर्चा सेलाउन नपाउँदै इरानको सेनाले युक्रेनी विमानलाई खसालिदियो ।
इरानको सेनाले पछि ‘मानवीय त्रुटिका कारण’ विमान खसालिएको स्वीकारोक्ति गरेको छ । दुर्घटनामा विमानमा सवार सबैको मृत्यु भएको थियो । खासगरी इरान र यूक्रेन
लेबनानको राजधानी बेरुतमा भएको शक्तिशाली विस्फोटनमा परी झण्डै ८० को मृत्यु भयो । अष्ट्रेलियामा लागेको डढेलोले धेरै जीव जन्तुले ज्यान गुमाए ।
आगलागी नियन्त्रण गर्न हम्मे हम्मे प¥यो । आगलागीको असर अन्य देशहरुमा पनि प¥यो । विश्वचर्चित घटनामध्ये अमेरिकामा एक जना अफ्रिकी–अमेरिकीको प्रहरीले हत्या गरेपछि रङ्गभेद आन्दोलनले अमेरिका तरङ्गित भयो ।
किमको मृत्युको हल्ला बेला बेलामा अमेरिकालाई चुनौती दिने र आणविक हतियार रहेको शक्तिशाली मुलुक मानिने उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनको मृत्युको हल्लाले पनि यस बर्ष धेरैको ध्यान खिच्यो ।
दक्षिण कोरिया र केही पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरूले किम २० दिनसम्म सम्पर्कविहिन हुँदा उनको मृत्यु नै भएको समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए । उनको निधन भएको समाचारप्रति विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखले समेत चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
सर्वत्र चासो र चिन्ता भइरहेकै बेला झण्डै २० दिनपछि उहाँ प्योङयाङ नजिकै रहेको एउटा कृषि मल उद्योग निर्माण सम्पन्न भएको उपलक्ष्यमा आयोजित समारोहबाट सार्वजनिक भएका थिए ।
उनको मृत्युको चर्चा यसअघि पनि पटक पटक हुनेगरेकोमा यस पटक पनि झुटो सावित भएको छ । अल विदा म्यारोडोना फुटबलका सर्वमान्य महान खेलाडी डिएगो म्यारोडोनालाई यसै बर्ष गुमाउनु प¥यो । उनले सन् १९८६ को विश्वकपको उपाधि अर्जेन्टिनालाई दिलाउनुभएको थियो ।
सन् २००० मा फिफाले मतदान गराउदा अर्र्जेिन्टनाका फुटबल हस्ती म्यारोडोना शताब्दीको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीका रूपमा चयन हुनुभएको थियो । खेल जगत्मा कतिपयले उहाँलाई फुटबलमयी खेलाडी र भगवान्समेतको संज्ञा दिने गरेका छन् ।
म्यारोडोनाको ६० वर्षको उमेरमा निधन हुँदा विश्वका लाखौँ खेलप्रेमी स्तब्ध भएका थिए । उनको निधन भएपछि अर्जेन्टिनाले तीन दिने राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको थियो । माथि उल्लेखित बाहेक पनि बर्ष सन् २०२० मा विश्वले अरु पनि धेरै प्रभावशाली र स्मरणीय व्यक्तिहरुलाई गुमाएको छ ।
त्यसैगरी अरु धेरै दीर्घकालिन महत्व राख्ने घटनाहरु पनि भएका छन् । धेरै देशले कोरोना महामारीका बीचमा पनि निर्वाचन गरेर नयाँ सरकार बनाएका छन् भने राजनीतिक समीकरण र सीमा विवादमा बेला बेलामा चर्चामा रहेका थिए । गाेरखापत्र
शुक्रवार, पौष १७ २०७७०९:२७:३८
कोरोना विरुद्ध खोप : 'नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई उच्च महत्व '
वैदेशिक रोजगार : " ५० करोड बराबरको नागरीक बचतपत्र बिक्री खुला"
मौसम पूर्वानुमान : नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव, सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा वर्षासँगै हिमपात हुने
एनआरएनए : ' विशेष महाधिवेशन आजदेखि हुँदै'
कांग्रेस नेता सिटौलाले भने : "सर्वोच्च अदालत ओलीको असंवैधानिक निर्णयसामू घुँडा टेक्न हुँदैन"
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने : "झन्डै ३ सय वकिल हुनुहुन्छ, बहस छिटो टुंग्याउनुस् "
संबैधानीक इजलासले माग्याे संसद विघटनसम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना
प्रधानन्यायाधीश जबराले साेधे : "संसद् विघटन अस्वीकार गर्दा सरकार धारा ७६ (१) कै हुन्छ, कसरी लिनुभएको छ ? "